ဘုန်းကျော်: ခေါင်းဆောင်တွေလား၊ ခေါင်းရှောင်တွေလား
ရေးသင့်၊ မရေးသင့်စဉ်းစားပြီးမှ ရေးလိုက်တယ်။ စိတ်ဆိုးလည်းမတက်နိုင်ဘူး။ ရင်ထဲမှာရှိတာကို ပြောမှရတော့မယ်။ နယ်စပ်အခြေစိုက်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့က ခေါင်းဆောင်တွေတာဝန်မယူတက်ကြဘူး။ မယူချင်တာလား။ အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့နေရာတော့လိုချင်ကြတယ်။ ငါ့အဖွဲ့အစည်းတိုးတက်အောင်၊ အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ စားဝတ်နေရေး၊ သူတို့ခလေးတွေရဲ့ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး လုပ်ပေးအတွက်ပျက်ကွက်ကြတယ်။
နယ်စပ်မှာ အဖွဲ့တွေများတယ်။ ကျနော်သိသလောက်၊ ကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့အဖွဲ့တွေကို ပြောပြမယ်။ ABSDF DPNS NLDLA KNU PDF PPF PLF ALP NDD အဖွဲ့တွေရှိတယ်။ ဒီအဖွဲ့တွေက အဖွဲ့ဝင်တွေအတော်တော်များများနယ်စပ်မှာရှိကြသေးတယ်။ တချို့ လည်း တတိယနိုင်ငံထွက်ကုန်ကြပြီ။ ပြန်လုပ်တဲ့ခပ်ရှားရှားပဲ။ ဘာ့ကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရလဲဆိုတော့ အခြေခံအကြောင်းရင်းအများကြီးရှိတယ်။ အထူးသဖြင့် အဖွဲ့အစည်းကို စိတ်နာသွားကြတယ်။ တော်လှန်ရေးကိုတော့ချစ်ကြတယ်။ ဘာ့ကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရလဲဆိုတာကိုရှင်းပြမယ်။
ကျနော်နေခဲ့တဲ့ စံခလပူရီ-ဘုရားသုံးဆူနယ်စပ်၊ မဲ့ဆောက် နဲ့ ဒုက္ခသည် စခန်းတွေမှာရှိနေတဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေ၊ သူတို့မိသားစုတွေ အရမ်းဒုက္ခရောက်ရတယ်။ ဘုရားသုံးဆူဘက်မှာ ABSDF တပ်ရင်း-၁ အခြေစိုက်တယ်။ ရဲဘော်တွေဟာ တောထဲက ရာဘာခြံတွေမှာရာဘာခြစ်ရတယ်။ စားဖို့အတွက်။ နေတော့လည်း စုတ်ပြတ်သတ်နေတာပဲ။ အပမ်းဖြေစရာ TV တောင်မရှိဘူး။ သူတို့ခလေးတွေ ကျောင်းသွားဖို့မလုပ်နိုင်ဘူး။ မိဘနဲ့အတူ ရာဘာခြစ်ရတယ်။ တောထဲကသီးပင်စားပင်တွေကို ရှာစားရတယ်။
အဖွဲ့အစည်းကလည်း သူတို့စားဝတ်နေရေးပြေလည်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူး။ ဒီပြသနာတွေရဲ့ တာဝန်အရှိဆုံးကတော့ လက်ရှိ ABSDF ဗဟိုကော်မတီပဲဖြစ်တယ်။ အထူးသဖြင့် ကိုသံခဲမှာတာဝန်ရှိတယ်။ ကိုယ်ခေါင်းဆောင်တော့လုပ်ချင်တယ်။ ဒီပြသာနာလေးတောင်မဖြေရှင်းနိုင်ဘူး။ တပ်ရင်း ၁-က ရဲဘော်တွေ ခလော့ခနီ ဒုက္ခသည်စခန်းမှာဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်။ အလုပ်မရှိ၊ အကိုင်မရှိ၊ စားဖို့တောင်အနိုင်အနိုင်ဖြစ်နေကြတယ်။ ယူအန်အစီအစဉ်နဲ့တတိယနိုင်ငံထွက်ဖို့လုပ်ပြန်တော့လည်း အဆင်မပြေ။ ဒီလိုပဲချောင်ပိတ်ပြီးနေရရှာတယ်။ ဘယ်လောက်သနားစရာကောင်းလဲ။
၈၈-ကတည်းက လုပ်လာကြတဲ့ရဲဘော်တွေ၊အသက်တောင်ရင်းပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်းတော်လှန်ရေးလုပ်တယ်။ နောက်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ ခံစားခွင့်က ခွေးတစ်ကောင်လောက်တောင် တန်ဖိုးမရှိတဲ့ဘ၀ဖြစ်ကုန်တယ်။ ဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်တာ ABSDF ဗဟိုကော်မတီဘဲဖြစ်တယ်။ အရင်တုန်းက ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတွေဖြစ်တဲ့ ကိုမိုးသီးဇွန်၊ ကိုနိုင်အောင်ဦးဆောင်တွေ ခေါင်းဆောင်တွေမှာလည်းလုံးဝတာဝန်ရှိတယ်။ ဒါက တပ်ရင်း ၁-ဥပမာပဲရှိသေးတယ်။
မဲ့ဆောက်နဲ့၊ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာရှိတဲ့ ရဲဘော်တွေလည်း တပ်ရင်း-၁ နဲ့ သူမသာကိုယ်အသုဘပဲ။ အနည်းဆုံးတော့ တတိယနိုင်ငံကိုထွက်နိုင်အောင် အဖွဲ့အစည်းကတာဝန်ခံပြီးလုပ်ပေးသင့်တာပေါ့။ တော်လှန်ရေးမလုပ်တဲ့ သူတွေတောင် တတိယနိုင်ငံမှာတပုံကြီးဖြစ်ကုန်ပြီ။ ကိုယ့်ရဲဘော်တွေ၊ သူတို့ရဲ့ သားသမီးတွေဟာ ကိုယ့်သားသမီးလို၊ သားသမီးချင်းကိုယ်ချင်းစာကြစေချင်တယ်။
နောက်ပြီး NLD-LA နဲ့အခြားအဖွဲ့ကရဲဘော်တွေလည်းအလားတူပဲ။ အဖွဲ့အစည်းကခေါင်းဆောင်တွေတော်တော်တာဝန်မဲ့ကြတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူတို့တွေတတိယနိုင်ငံလည်းရောက်ရော မိမိအဖွဲ့အစည်းကို ဘာမှပြန်ပြီးကူညီမပေးတော့ဘူး။ ဒါဟာ အဖွဲ့အစည်းက ခေါင်းဆောင်တွေတာဝန်ကင်းမဲ့ခဲ့လို့ လက်စားချေခံရတယ်လို့မြင်တယ်။ နို့ဘိုးဒုက္ခသည်စခန်းမှာ NLD-LA ကရဲဘော်ကြီးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ အသက်တောင်အသေခံပြီးရှေ့ တန်းမှာတိုက်ပွဲဝင်လာခဲ့တယ်။ သူလေဖြတ်တော့၊ သူ့မိန်းမက သူ့ကို သူများအိမ်မှာလိုက်ပြီးအ၀တ်လျှော်ကြွေးရရှာတယ်။ ခလေးနှစ်ယောက်က ဟိုအပင်တက်ဒီအပင်တက်ပြီး အိမ်ရဲ့ စားဝတ်နေရေးကိုဖြည့်တင်းရတယ်။ အခုသူတို့မိသားစု အမေရိကန်ကိုရောက်ကုန်ပြီ။ သူတို့ဘယ်တော့မှ NLD-LA ဆိုတာကြားချင်တော့မှာမဟုတ်တော့ဘူး။
မည်သည့်ရဲဘော်မဆို ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်အပေါ်မှာတော့ သံယောဇဉ်နဲ့တန်ဖိုးထားမှုရှိတယ်။ အလားတူ KNU PDF ALP PLF PPF ရဲဘော်တွေလည်းဒီအတိုင်းပဲ။ အဖွဲ့အစည်းက ထမင်းနပ်မှန်အောင်မကြွေးနိုင်ရှာဘူး။ ခိုင်းစရာရှိရင်တော့ ခေါ်ခိုင်းတယ်။ တော်တော် ခေါင်းဆောင်မပီသတဲ့လူတွေပဲ။ အနည်းဆုံးတော့ မိမိအဖွဲ့ဝင်တွေကို တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းလုပ်ပေးသင့်တာပေါ့။
DPNS လည်းဘာထူးလဲ။ ကန့်ထဲဝင်ရင်ပေးတဲ့ငွေက တပြားနှစ်ပဲ။ မဲ့ဆောက်က ခေါင်းဆောင်နဲ့မိန်းမ၊ သူ့သားသမီးကြတော့ အလျှံအပယ်စားနိုင်သောက်နိုင်တယ်။ ကျောင်းကောင်းကောင်းထားနိုင်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် အဖွဲ့ဝင်တွေနိုင်ငံခြားအဆင်ပြေတဲ့အခါမှာတော့ ဒီလူတွေကိုဘောပဲလို့ပြောကြတာတရားတယ်။
တော်လှန်ရေးလုပ်ပြီး သေသွားတဲ့လူတွေတပုံကြီးရှိတယ်။ သူတို့ရဲ့ ကျန်ရစ်သူမိသားစုတွေကတော့ သူတို့သားတွေကိုဘယ်လောက်နှမျောလိုက်မလဲ။ ဒါ့ကြောင့်ခေါင်းဆောင်တွေမှာ လုံးဝအပြစ်ရှိတယ်လို့ကျနော်ပြောတယ်။ အခုလက်ရှိနယ်စပ်မှာတာဝန်ယူနေတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေဟာ ခေါင်းဆောင်ပဲလုပ်ချင်တယ်။ ခေါင်းဆောင်နဲ့တူတဲ့ တန်တဲ့အရည်အချင်း၊ အသိစိတ်ဓာတ်ကင်းမဲ့ကြတယ်။ တာဝန်ကင်းကြတယ်။
ခင်ဗျားတို့ .... ရဲဘော်တွေရဲ့ ဘ၀ထဲကို တစ်ပတ်လောက်ဝင်ကြည့်စမ်းပါ။ ရဲဘော်တွေ ရာဘာခြစ်ရသလို၊ ပန်းရံလုပ်ရသလို၊ ခင်ဗျားတို့လုပ်ကြည့်ပါလား။ ခင်ဗျားတို့ခလေးတွေကို ရာဘာခြစ်ခိုင်းမလား။ သူများအိမ်က ခိုင်းမှ ထမင်းစားရတဲ့ခလေးတွေဟာ ခင်ဗျားတို့သားသမီးတွေဖြစ်ကြည့်ပါလား။ အနည်းဆုံးတော့ ကိုယ်ကတာဝန်မယနိုင်ရင်တောင် တတိယနိုင်ငံတွေထွက်နိုင်အောင် တာဝန်ယူပြီးလုပ်ပေးကြပေါ့။ အခုတော့ ခေါင်းဆောင်တွေဟာ...ခေါင်းရှောင်အဆင့်အတန်းနဲ့ရပ်ကုန်ကြပီ။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Monday, April 05, 2010
တစ်ခုမှာ ဖြစ်နိုင်မယ့်ထွက်ပေါက်လေးတွေကို ငယ်သားတွေအတွက် စဉ်းစားပေးသင့်ပါတယ်..။ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်အတွက်တော့ အဖြစ်သင့်ဆုံးနဲ့ စဉ်းစားသင့်တာတွေပါ.. ထောက်ခံပါတယ်..ကိုဘုန်းရာ..။
very good shouting. you should write more n more about such kind of case. it´s very important for the revolution. for example, if u have no clear mind, vision n trust, u can not create your art craft. revolution also like that. no more victory or achievement if there isadirty n inequality in the revolution. one more important thing is over 90 percent of the opposition want2suck n lick2white1´s ...... n ......... that´s the weakest point of our society. really slavery minded by themselves.
when i was in teenager, i was ready4sacrifice my life4the revolution. but not now. cal me sell fish. very sorry2say that. anyway, i´m always in the revolution by sprit. i love poor n true revolutionaries.
there ralot of inequality in the revolution n organizations. who the poor people will give their time, energy n life for mother f...ing leaders?
we have schools run by the revolutionaries on the border. the other are run by the private (the most expensive). all the leaders or somewhat leader´s children go to private school even they ( leaders) are founder or board member of the school run by the revolutionaries. what´s their determination.
btw, i admire ur study in environment but i´m not from that field.